Ny chip vaovao A15 Bionic an'ny iPad mini dia nametra ny heriny | Vaovao IPhone
Ny mini iPad dia iray amin'ireo fitaovana natolotra andro vitsy lasa izay ary nanome ny tsy nampoizina izy ireo tamin'ny fitokanana ny keynote. Miaraka amina endrika vaovao sy fanavaozana ny ao anatiny miaraka amin'ilay puce Aion Bionic mitovy amin'ilay natsangan'ny iPhone 15. Na izany aza, ireo mari-pahaizana voalohany miseho dia maneho fa hafainganana famantaranandro iPad mini ahena ary noho izany ambany kely noho ny iPhone 13 ny fampisehoana.
iPhone 13 sy iPad mini mizara A15 Bionic fa amin'ny hery samihafa
Ireo mpikirakira toy ny A15 Bionic dia manana singa samihafa ao anatiny toy ny CPU. Ny CPU dia miandraikitra ny fanodinana torolàlana avy amin'ny programa, fampiharana ary serivisy samihafa amin'ny rafitra fiasa. Ny hafainganam-pandehan'ireo torolàlana ireo dia mamela hanome sary iray hafa na kely kokoa momba ny fampisehoana sy ny herin'ny mpanodina. Ohatra, ny CPU voafaritra amin'ny 3,2 GHz dia hamokatra tsingerina 3.200 miliara isan-tsegondra.
Ny voalohany teboka navoaka iPad mini 2021 sy seho iPhone 13 fampisehoana samy hafa manana chip A15 Bionic mitovy. Ny mini iPad dia manome valiny 1595 isa miaraka amina fotony iray ary 4540 isa amin'ny fanadinana multicore. Raha ny momba ny iPhone 13, isa 1730 dia azo miaraka amin'ny fotony ary amin'ny isa marobe dia 4660. Midika izany fa amin'ny ankapobeny ny mini iPad dia eo anelanelan'ny 2 sy 8% mahery kely kokoa noho ny iPhone 13.
Ny tena anton'ity data ity dia miankina amin'ny hafainganan'ny famantaranandro (na matetika) ny chip A15 Bionic araka ny efa noresahintsika teo aloha. ny iPhone 13 dia voahodina amin'ny 3,2 GHz raha ny an'ny iPad mini dia voafetra amin'ny 2,9 GHz. Io fahasamihafana io dia afaka manamarina io fihenan'ny herin'ny processeur io.
Na izany aza, Fantatr'i Apple ny fetran'ny A15 Bionic ary fantany koa ny fampiasana omena ny iPhone sy ny iPad mini. Noho izany, fantatray fa avy amin'i Cupertino io fanovana io ary na dia tsy ho fantatsika mihitsy aza ny anton'izany underclocking, Ny mazava dia tsy ho tsikaritr'ireo mpampiasa io fihenan'ny fampisehoana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny chip vaovao A15 Bionic ao amin'ny mini iPad dia voafetra amin'ny heriny
Apple dia efa mamela ny hanitatra ny AppleCare + any Espana, France ary Italia